श्रीलंकाविरुद्धको एकदिवशीय शृंखलामाथि पाकिस्तानको कब्जा
निको भएका ३०८१४६
अपडेटः बुधबार, चैत २६, २०७६ । १९:०४ बजे । स्रोत : coronavirus.jhu.edu
नेपाल लाइभ बिहीबार, असोज १६, २०७६, ०८:३०
काठमाडौं- श्रीलंका विरुद्धको तेस्रो एकदिवशीय क्रिकेटमा पाकिस्तान विजयी भएको छ। कराँचीमा भएको खेलमा पकिस्तान ५ विकेटले विजयी हुँदै शृंखलामाथि नै २-० ले कब्जा जमाएको छ।
३ खेलको एकदीवशीय शृंखलामा पाकिस्तानले पछिल्ला दुवै खेल जित्दै शृंखलामाथि कब्जा जमाएको हो। पहिलो खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो।
यसअघि श्रीलंकाली टोलीमाथि आतंकवादी आक्रमण भएपछि पाकिस्तानमा ८ वर्षसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल हुन सकेको थिएन। सन् २०१७ मा श्रीलंकाले लाहोरमा टी-२० क्रिकेट शृंखलाको अन्तिम खेल खेलेको थियो। सो शृंखलाका बाँकी खेल भने युएईमा भएका थिए। सोपश्चात गत वर्ष वेस्ट इन्डिज पाकिस्तानमा गएर खेलेको थियो। यसपटक पुनः श्रीलंका नै क्रिकेट खेल्न पाकिस्तान पुगेको हो।
जारी शृंखलापछि पाकिस्तान कुनै पनि देशका खेलाडीका लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जाने विश्वास गरिएको छ।
श्रीलंकाले अब पाकिस्तानसँग लाहोरमा ३ वटा टी-२० खेल खेल्नेछ। पहिलो खेल शनिबार हुनेछ।
टेलिकमको ‘स्टे कनेक्टेड अफर’को समयावधि थपियो
नेपाल लाइभ समाचार [भिडियो] बुधबार, चैत २६, २०७६
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा कोरोना संक्रमित बेलायती प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना बुधबार, चैत २६, २०७६
टेलिकमको ‘स्टे कनेक्टेड अफर’को समयावधि थपियो बुधबार, चैत २६, २०७६
नेपाल एयरलाइन्स जापान र चीन जाँदै बुधबार, चैत २६, २०७६
असईदेखि आइजीसम्मको तलब काटेर कोरोना कोषमा बुधबार, चैत २६, २०७६
कोरोना परीक्षण : के हो दक्षिण कोरियाली मोडल? प्रा डा रेवती रमण मल्ल
कहिले सकिन्छ कोरोना कहर? डा सन्देश दाहाल